China mavara 5ml 10ml kudonhedza chiratidzo simbi roller bhora girazi roll pamafiyumu mabhodhoro fekitori uye vanotengesa | Jiamei
ane mavara 5ml 10ml inodonhedza simbi simbi yakatenderera bhora girazi roll pamabhodhoro ezvinonhuwira
Pamusoro Kubata: SCREEN PRINTING
Maindasitiri Kushandisa: kuchengetwa kwega
Nheyo yezvinhu: Girazi
Chigadzirwa cheMuviri: Girazi
Collar Chinyorwa: Girazi
Simbiso Type: Isa On
Muenzaniso Nhamba: BMA0VC0R005
Zita reBrand: Ruva
Vhoriyamu: 5ml 10ml
Mharidzo: Yakapihwa Zvakasununguka
Apex Carton Box
Ruvara rwebhodhoro: Bhuruu kana tsika
Kukura: 60 * 15mm
1.Direct fekitori ine yemakwikwi mutengo, ipa vatengi hupfumi kurongedza mhinduro.
2.Rich vane ruzivo mainjiniya, gadzira akanaka mhando mabhodhoro egirazi.
3.Customized LOGO inogona kudhindwa
5.Give dhisikaundi kana iwe uine $ 1000
6.Deliver nhumbi nenguva.
Zvimiro: - Girazi Rinodzivirira Pakukuvadza UV Rays. - Bhodhoro risingagadziriswe negirazi, rinoshanda uye rinogara bhora - Rakanaka pakufamba, nyore kutakura, rinozadzikiswa, rinotakurika uye nyore. - Inokodzera kurodha mafuta akasiyana siyana, semafuta akakomberedzwa akakosha, oiri yemiriwo, musanganiswa, pefiyumu, nezvimwewo. Asi haina kukodzera viscous mvura. - Inoshandiswa pamaoko, kumeso uye nedzimwe nhengo dzemuviri.
7010907700, 7010907700, 7010907700, 7010907700
denderedzwa, Cylinder, yakagadzirirwa
Ndarama, sirivheri, nhema
Muviri wepasi maitiro
chinovhara kudhinda, rutanda chitaridzi
Cap pamusoro maitiro
Logo pamusoro maitiro
Kupisa kutsikisa, Screen Printing, decal
Alibaba Trade vimbiso Order, Paypal, T / T, Western Union, Mari Gram, Kiredhiti Kadhi, nezvimwe
100pcs, uye inogona kupa muyenzaniso.
yakakosha mafuta, pefiyumu sampuro, zvizorwa mvura yakaita sekirimu, mafuta, nheyo, serum, primer, concealer, kutarisirwa kweganda, nezvimwewo e-mvura, Kuchengeta Kwega
1) Samples mutengo: mahara
2) Lead nguva: 1-2days
1) Yakasarudzika sampuli 50-100 usds inosanganisira expression chaji
2) Lead nguva: 7-10 mazuva
Bulk hurongwa Kutungamira nguva
Zvichienderana nemamiriro chaiwo ekugadzirwa. kazhinji mazuva makumi matatu mushure memasampuli akasimbiswa. Mazuva makumi matatu neshanu kusvika makumi mana mushure mekugamuchira mari
bhegi repurasitiki, shrink, pvc bhokisi, bepa bhokisi, pepa pepa, katoni, pallet
taura 5-45days, mudziyo 7-55days, maererano nekero yako
Iyo bhodhoro chinhu chisina chinhu chinogadziriswazve gadzira-up kesi.Iyo yakakodzera kuti ishandiswe nemushonga unodzinga mosquito, kirimu, moisturizer, sanganisa mafuta akakosha, mafuta ekuzora kana zvimwe zvinwiwa.
Kuonekwa kwebhodhoro kuri nyore uye kune rupo, muromo wakatsetseka, pasi wakatsetseka, ukobvu hwemadziro hwakafanana, kubwinya kwakajeka, kuiswa chisimbiso kwakasimba, uye mhando yechigadzirwa inogona kuchengetedzwa zvirinani.
Kukura kwedhiramu kunotendera kupatsanuka kwakanaka kweiyunifomu nemvura isina kuwanda.Ichivharo chinoita kuti bhodhoro riwedzere kusimbiswa uye rinotadzisa chigadzirwa kubuda.
girazi rakanatswa bhodhoro remafuta
Unyanzvi: 10 ml
Ruvara 1: Dema
Ruvara rwechipiri: Sirivheri
Vhura mabhodhoro maviri
Yakanaka kune akakosha maoiri, zvinonhuwirira, zvinonhuwira uye kudzivirirwa kubva kune anokuvadza mwaranzi
[Bhora]: Bhora rakagadzirwa nemhando yepamusoro simbi isina simbi, ngura inodzivirira.Tightness inodzivirira chero kuvuza
[Saizi chirevo]: Sirivheri negoridhe, zvinogona kubata 10 ml yemvura; Bhodhoro iri rakareba 7.7 cm uye 17 mm yakafara Saizi inotakurika inokodzera kuenda kunze kana kufamba. Ndokumbira utarise kune iyo pikicha yekutengesa
[Inoshandiswa zvakanyanya]: Iyo 10ml inokwana inokutendera iwe kuchengetedza echisikwo maoiri, serum, zvinonhuwira kana zvimwe zvinwiwa kune zvako zvezuva nezuva zvekuchengetedza ganda zvido, zvakakwana zvekufamba uye zviri nyore kutakura muchikwama chako
Pashure: 10ml yegirazi-girazi bhodhoro yakanaka kune anonhuwirira akakosha maoiri Simbi yesimbi simbi bhora iri nyore kutsvedza paganda
Zvadaro: Luxury 5ml 10ml 15ml gemstone roller bhora girazi rekristaro yakakosha mafuta anonhuwira bhodhoro